तेस्रो बिहे नगर भन्दै आउँछन्, के मेरो बिहे खर्च उनीहरुले तिर्नुपर्ने हो ? : अभिनेत्री श्वेता तिवारी :: Setopati
एजेन्सी मुम्बई, चैत १८
'कसौटी जिन्दगीकी'बाट प्रेरणाको भूमिकामा चर्चा कमाएकी टेलिभिजन अभिनेत्री श्वेता तिवारीले आफ्ना दुई असफल वैवाहिक सम्बन्धका तीता अनुभव साटेकी छन्।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार श्वेताले आफूले श्रीमानबाट घरेलु हिंसा खप्नु परेकोले दुई वटा वैवाहिक सम्बन्ध टिकाउन नसकेको बताएकी हुन्।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा धेरै उतार चढाव भोगेकी श्वेताको किशोरावस्थामा राजा चौधरीसँग विवाह भएको थियो। २७ वर्षको उमेरमा उनले घरेलु हिंसाको आरोप लगाएर राजासँग सम्बन्ध विच्छेद गरिन्। सन् २०१३ मा उनले अभिनव कोहलीसँग विवाह गरेकी उनको दोस्रो विवाह पनि टिकेन।
आफ्ना दुई वटा सम्बन्धबारे बोल्दै उनले पहिलो विवाहमा उनको घरेलु हिंसाको शिकार भएको बताएकी हुन्। उनले घरेलु हिंसा भोग्नुपर्दा पनि महिलालाई समाजले यस्ता घटनालाई सामान्य रुपमा लिएर वैवाहिक सम्बन्ध जोगाओस् भन्ने चाहेको बताइन्।
उनको पहिलो विवाहबाट छोरी र दोस्रो छोरा छन्। 'मध्यमवर्गीय परिवारमा, बाल्यावस्थादेखि नै सम्झौता र समायोजन गर्न भनियो। समाजले तपाईंलाई एक दुई थप्पड केही होइन भन्छ। तर मेरी आमाले त्यस्तो कहिले पनि भन्नुभएन,' उनले भनिन्। उनले यस्तो अवस्थामा महिलाले बच्चाको भविष्यबारे सोच्न दबाब दिनेसमेत बताइन्।
'तर जब मैले २७ वर्षको उमेरमा पहिलो श्रीमान छोडेँ, बच्चाका अगाडि आमा-बुवाले दिनहुँ झगडा गर्नु वा उनीहरुले बुवालाई मातेको देख्नु एक्लो आमा वा बुबासँग हुर्काउनु भन्दा नराम्रो कुरा हो,' उनले भनिन्।
श्वेताले अनुभव सुनाइन्, 'तपाईं विवाहपछि १० वर्ष सँगै बसेर छुट्टिनु भयो भने कसैले प्रश्न गर्दैनन्। तर तपाईं दुई वर्षमै अलग हुनुभयो भने सबैले भन्छन् कति चोटी बिहे गर्छौ?'
श्वेताका अनुसार दुई पटक सम्बन्ध असफल भइसकेकोले मानिसहरु उनलाई सल्लाह दिन आउँछन् र भन्छन्, 'तेस्रो बिहे नगर।'
उनको प्रश्न छ, 'म उनीहरूलाई सोध्छु, को हुन उनीहरु? के मेरो बिहे खर्च उनीहरुले तिर्नुपर्ने हो? यो मेरो निर्णय हो। यो मेरो जीवन हो।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १८, २०७७, १३:५०:००
वेब सिरिजमा अजय देवगनको धमाकेदार डेब्यू
अभिनेत्री भूमि पेडनेकर बनिन् 'कोभिड लडाकु'
अभिनेत्री मुग्धा भन्छिन्, 'लिभ-इन सम्बन्धमा खुसी छु तर मान्छेहरु सोध्छन्- बिहे कहिले गर्ने?'